Laacib | laacibfm.com
Laacib Admin - December 2, 2021 0
Heshiis is dhaafsi ah oo ay ku lug leeyihiin weeraryahanka Chelsea Timo Werner iyo weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa la sheegay in laga wada hadlay. Inkastoo uu yahay nin muhiim...
Liverpool ayaa loo sheegay War wanaagsan oo ka imaanaya dhanka dhaawacyada ee kooxda iyadoo Joe Gomez iyo Naby Keita ay ku soo laabteen tababarka ka hor kulanka sabtida ee Wolverhampton Wanderers. Gomez ayaa Reds ku...
Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in loo sheegay inay bixiso 29.7 milyan ginni si ay u hesho adeega weeraryahanka Lille Jonathan David . Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Canada ayaa qaab...
Photo/Reuters Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Borussia Monchengladbach Denis Zakaria ayaa lagu soo waramayaa inuu go’aansaday inuu u dhaqaaqo Liverpool . 25-sano jirkaan ayaa mar kale u ahaa ciyaaryahan muhiim u ah...
Manchester City oo kula xifaaltameysa Liverpool iyo Barcelona saxiixa Renato Sanches
Photo/Reuters Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay ku biirtay tartanka loogu jiro ciyaaryahanka khadka dhexe ee Lille Renato Sanches . 24-sano jirkaan ayaa si xoogan loola xiriirinayay inuu ka tagayo...
Paris Saint-Germain oo isha ku heysa xaalada Riyad Mahrez.
Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay si dhow isha ugu hayso xaalada Riyad Mahrez ee Manchester City . 30-sano jirkaan ayaa ku riyaaqay fursado qaali ah Champions League xilli ciyaareedkan,...
Robert Lewandowski oo Amray wakiilkiisa inuu ka Shaqeynta u dhaqaaqista Real Madrid
Robert Lewandowski ayaa lagu soo waramayaa inuu ku amray wakiilkiisa Pini Zahavi inuu u dhaqaaqo Real Madrid inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaaga soo aadan. 33-sano jirkaan ayaa markale...
Manchester City weeraryahanka Ferran Torres ayaa ku dhow in beeca xorta ugu biiro Barcelona 2022. La Blaugrana ayaa xiiso guud u qabta xiddiga heerka caalami ee dalka Spain, waxaana lagu soo...
Dusan Vlahovic oo lala xiriirinayo Man Utd oo ka hadlay Qorshihiisa bisha Janaayo”
Weeraryahanka loo baahan yahay ee Fiorentina Dusan Vlahovic ayaa lagu soo waramayaa inuusan qorsheyneynin inuu ka tago kooxda bisha Janaayo. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Serbia ayaa diiday fursad uu ku sii joogi lahaa La...
Horudhac: Real Madrid Vs Sevilla ee Horyaalka La-liga Spain Wararka Labada...
Mid ka mid ah kulamada ugu waaweyn ee jadwalka La Liga ayaa ka dhici doona Bernabeu Caawa, iyadoo hogaamiyaasha horyaalka Real Madrid ay soo dhaweynayaan Sevilla...
Alexia Putellas Oo Ku Guuleysatay Ballon d&rsquo;Or-ka Dumarka & Kaalmaha 1-10aad...
Manchester United 3-2 Arsenal: Ronaldo oo dib u soo laabtay isagoo...
War Rasmi Ah: Afarta Ciyaaryahan Ee Ku Tartami Doona Xiddigii Toddobaadka...
Paris Saint-Germain oo xaqiijisay Mudada uu Garoomada ka Maqnaanayo Neymar
Wararka Suuqa kala Iibsiga Caawa: Kuwa ugu Danbeeyay, Timo Werner, Jorginho,...